लाख नेपालीसहित २४ लाख आप्रवासी बस्ने कतार यतिखेर एकसाथ दुइटा ठूला चुनौतीसँग जुधिरहेको छ।
नेपालका ५६ प्रतिशत परिवारका सदस्य न्यून आम्दानीका लागि वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी तथा मलेसियामा छन्।
दीर्घकालीन सुधारको खाँचो
राजनीतिक संकटका बेला राज्यहरूले मानवअधिकारप्रति कडाइको नीति लिने गरेको पाइन्छ।
बेलायतमा गत महिना एउटा रोबोलोक्स भन्ने मोबाइल एप्सबाट बालबालिकाहरुलाई इच्छा अनुसार गेम बनाउन मिल्ने सामाजिक सञ्जाल जस्तो साइटमा कयौं बालबालिकाहरुलाई अञ्जान व्यक्तिहरुका फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आउने र कार्टुनको भर्चुअल दुनियाँमा बिबिध अनियन्त्रित गतिबिधि हुने गरेको खबर संगै एप्स र सामाजिक सञ्जालको सुरक्षा सम्बन्धि खतरा बढेका खबरहरु सुनिन थालेका छन् ।
एउटी महिलाको साथ पाउँदैमा जन्मदाता बाबाआमाको सबै गुण चटक्कै बिर्सने कस्तो चलन ? बुहारीको रुपमा भित्रेकी महिलाले किन यो कुरा बुझ्दैनन् ? जब आफुले आफ्नो श्रीमानका बाबाआमा आफुलाई घाँडो भएर पाल्न सक्दिन, साथमा राख्न नसकेर जानाजान आश्रममा पठाउँछिन् ।
एमाले अध्यक्ष ओलीप्रति मलाई एउटा विषयमा सहानुभुति छ । उनी निर्विवाद नेपालका सबैभन्दा प्रष्टवक्ता राजनीतिज्ञ हुन् । विम्ब र उखानहरुले उनका भनाइलाई पेचिला जरुर बनाउँछन् तर तिनको उपयोग उनले आफ्ना कुरालाई गोलमटोल बनाउन प्रयोग गर्दैनन् बरु झन् तिखार्न प्रयोग गर्छन् ।
भारतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश एमएन भेंकटचलिया भ्रष्टाचार र सुशासनबारे भन्थे, ‘सनलाइट इज द बेस्ट डिस्इन्फेक्टेन्ट ।’ अर्थात् पारदर्शिता नै शुद्धीकरणको सबैभन्दा राम्रो उपाय हो । सबै गलत काम अन्धकारमै हुनेहुँदा तिनमाथि प्रकाश पर्नासाथ काममात्रै रोकिँंदैनन्, गलत काम गर्ने मानिस त्यसका लागि जवाफदेही बन्न बाध्य हुन्छ । तर विडम्बना, हाम्रो समाज पारदर्शिताको मामिलामा त्यति अगाडि छैन ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एउटा अलि अस्वाभाविक लाग्ने दृश्य प्राय: दोहोरिन्छ । हातमा पासपोर्टको फारम च्यापेका र थाप्लोमा नाम्लो लगाएर कोयोङमा सानो बच्चा बोकेका आमाहरूसँग तिनका श्रीमान पनि साथै हुन्छन् भने आङदुङ लगाएर चिटिक्क परेर आएका उन्नाइस–बीसका केटीहरूसँग बाबु ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् चोरी रोक्न उपत्यकामा सञ्चालन गरिरहेको अभियान सराहनीय छ । विद्युत्को माग धान्नै मुस्किल परिरहेका बेला विद्युत् चुहावटको मात्रा पनि उल्लेख्य देखिएपछि प्राधिकरणले ‘हुकिङ’ हटाउने तथा छापा मारेर पक्राउ गर्ने अभियानलाई तीव्र बनाएको छ ।
अति जान्ने–बुझ्ने दोभासेहरु
‘विश्वभरमै आप्रवासी कामदारको अनुपात/ट्रेन्ड के–कस्तो छ ? कुनै तथ्यांक तपाईंसँग छ ? ती विश्वभर फैलिएका कामदारले आ–आफ्नो देशमा पठाउने रेमिटेन्सको हिसाबबारे के थाहा छ ?’
वास्तवमा क्षमता र दक्षताको हिसाबले कोहीभन्दा कम नहुने जनशक्ति तयार गर्नु नै हाम्रो शिक्षा व्यवस्थाको लक्ष्य हो । यसका लागि शिक्षाको सही व्यवस्थापन र यसका विविध आयामलाई उच्च स्तरमा तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।